Microsoft Edge Dev wuxuu soo bandhigay muuqaal weyn oo loogu talagalay PWAs | BehMaster
Bogga ugu weyn/Android/Microsoft Edge Dev wuxuu soo bandhigay qaab weyn oo loogu talagalay PWAs
Microsoft Edge Dev wuxuu soo bandhigay qaab weyn oo loogu talagalay PWAs
Microsoft waxay leedahay kanaalo siideynta kala duwan oo lagu magacaabo Stable, Beta, Dev, iyo Canary. Kanaalada Dev iyo Canary ee Microsoft Edge waxay helayaan waqti hore ee astaamaha soo socda. Microsoft waxay sii daysay dhismihii hore ee Edge soo socda oo leh astaamo wararka ku jira kanaalada Dev iyo Canary ee tijaabada bilowga ah.
Nooca Microsoft Edge Dev 93.0.957.0 wuxuu ku nool yahay Android iyo nidaamyada kale ee hawlgalka. Waxaad ka heli kartaa Dev si aad u dhisto Play Store. josh_bodner oo ah maamulaha bulshada ee Microsoft Edge ayaa dhajiyay isbeddelka Microsoft Edge Dev 93.0.957.0.
Marka loo eego isbeddelka, Microsoft Edge Dev 93.0.957.0 wuxuu soo bandhigay qaab cusub oo la xidhiidha PWAs. Waxay kuu oggolaan doontaa inaad beddesho astaanta PWA-yada ama goobaha la rakibay inta lagu jiro rakibidda. Waxaad u dejin kartaa summada abkaaga PWA marka aad rakibayso.
Waxay siin doontaa isticmaaleyaasha kontorool dheeri ah oo ku saabsan PWA-yada ay ku shaqeyso Microsoft Edge. Waxaa laga yaabaa inaan aragno doorashooyin badan oo noocaas ah mustaqbalka kuwaas oo ugu dambeyntii bedeli doona goobta PWA-yada iyo shabakadaha rakibay. Waxay noqon doontaa madadaalo iyo xiiso leh in lagu daawado wararka soo socda.
Maamulaha Microsoft Edge Community josh_bodner ayaa sidoo kale caddeeyay in nooca Edge 92 uu dhowaan ku imaanayo cusboonaysiin xasilloon. Aan aragno goorta la bilaabayo. Taariikhdaas oo kale laguma qeexin boostada.
Waxaad ka hubin kartaa isbeddelka dhismihii ugu dambeeyay ee boostada bulshada ee uu qoray josh_bodner Maamulaha Bulshada Microsoft Edge.
Microsoft waxay qorsheyneysaa inay ku shubto Windows 365 aaladaha Android
Apps-ka Android ayaa imaanaya Windows 11 - Microsoft
Iskaashiga Microsoft ee Amazon ee taageerada app-ka Android, maaha tallaabo caqli-gal ah
Microsoft Edge ee Android wuxuu keenaa wararka carruurta ee MSN iyo goobaha dib loo habeeyay
3 Siyaabo Fudud Oo Si Deg Deg Ah Loogu Dejin Karo Barta Diyaarinta WordPress
5 siyaabood oo aad ugu Abuuri karto Khibrad Macmiil Immersive Dukaankaaga eCommerce